China 201 ashisayo ipuleti insimbi engagqwali Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Ubukhulu bepuleti lensimbi engagqwali elingu-201 elikhulu ukwedlula i-1.2mm, ukuthi nge-acid ethile ne-alkali ukumelana, ukuminyana okuphezulu njalonjalo, ukukhiqizwa kwamacala ahlukahlukene, ikhava yangemuva yebhande lezinto ezisezingeni eliphakeme. Ikakhulu esetshenziselwa ipayipi lokuhlobisa, ipayipi lezimboni, eminye imikhiqizo yokudweba engajulile.
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 201 Kuyashisa insimbi engenasici egoqiwe ipuleti, 201 HRP, PMP
Pallet isisindo: Usayizi: 1.0MT-6.0MT
201 Ibanga elifanayo kusuka emazingeni ehlukene esigayo
201 Ingxenye yamakhemikhali i-LISCO – L1:
C: ≤0.15, Si: ≤1.0 Mn: 8.0-10.5, Cr: 13.5～16.00, Ni: 1.0～3.0, S: .00.03, P: ≤0.06 Cu: <2.0, N≤0.2
I-201 impahla yomshini iLISCO – L1:
Ukunwebeka (%):> 35%
Okuhlukile phakathi kuka-201 (L1, J1) no-202 (L4, J4) ipuleti lensimbi engagqwali nekhoyili
Insimbi engagqwali engu-201 no-202 yizinto ezimbili ezivame kakhulu zensimbi engagqwali, ezingezensimbi ezingenasici ezingama-200, khona-ke uyini umehluko phakathi kwalezi zinto ezimbili? Ngaphezu kwamalebula ahlukile wezinto abangelwa izithako ezahlukahlukene, yini umehluko wangempela kuzinhlelo zokusebenza ezithile nezici ezithile? Ake sihlolisise namuhla.
Embonini yensimbi engagqwali, u-201 umele impahla. Insimbi engagqwali engu-201, kubhekiselwa ethemini ejwayelekile yensimbi engagqwali engu-201 nensimbi engamelana ne-asidi. Insimbi engagqwali engu-201 isho insimbi emelana nokugqwala ngomshini obuthakathaka njengomkhathi, umusi namanzi, ngenkathi insimbi emelana ne-asidi isho insimbi emelana nokugqwala ngamanxiwa okufaka amakhemikhali afana ne-asidi, i-alikhali nosawoti. Imodeli ejwayelekile kazwelonke yi-1Cr17Mn6Ni5N. I-elemental manganese (ne-nitrogen) yepuleti lensimbi engagqwali engu-201 ingena esikhundleni senye noma yonke i-nickel ukukhiqiza okuqukethwe okuphansi kwe-nickel okungafinyeleli ekulinganisweni futhi kwakheke i-ferrite. Ngakho-ke, okuqukethwe kwe-ferrochrome kuchungechunge lwensimbi engenasici engama-200 kuncishiswe kwaba ngu-15% -16%, kuze kufike ku-13% -14%, ngakho-ke ukumelana kwayo nokugqwala akunakuqhathaniswa ne-304 nenye insimbi efanayo.
Insimbi engagqwali engu-202 ingenye yochungechunge lwensimbi engenasici engama-200, imodeli ejwayelekile kazwelonke yi-1Cr18Mn8Ni5N. Uchungechunge lwensimbi engagqwali lwama-200 luyinsimbi ephansi ye-nickel ephezulu ye-manganese enokuqukethwe kwe-nickel nokuqukethwe kwe-manganese okungaba ngu-8%. Kuyinto insimbi engagqwali ye-nickel-nickel. 202 yisibonakaliso saseMelika, esikhundleni se-1Cr18Ni9. Izinsimbi ezingenasici zase-Austenitic zibonakaliswa amazinga okushisa esigabeni esiphakeme ngakho-ke zingasetshenziswa njengezinsimbi ezingamelana nokushisa. Ukuze kwenziwe ushintsho lwesigaba sensimbi engagqwali, kufanele lushise lube ngaphezu kuka-1000 ° C, kuthi ku-350 ° C, isakhiwo se-metallographic asiguquki, okungukuthi, ukusebenza kwensimbi akuguquki ngokuyisisekelo. Izokhukhumala kuphela ngenxa yokushisa, kepha ngeke ishintshe kakhulu. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, kunganakwa. Ngalesi sizathu, insimbi engagqwali engu-202 inokumelana okuhle nokushisa okuphezulu. Lokhu kusebenza, insimbi engagqwali engu-202 isetshenziswa kakhulu ekuhlobiseni izakhiwo, ezobunjiniyela bakamasipala, izigcini zomgwaqo omkhulu, izakhiwo zehhotela, izinxanxathela zezitolo, izingilazi zezingilazi, izikhungo zomphakathi nezinye izindawo. Yenziwe ngemishini yokwenza ipayipi yokwenza ngokunemba okuphezulu, okwakhiwa ngokuzicijela nokushisela, okugoqiwe nokwakhiwa, futhi kugcwaliswe ngokuvikelwa kwegesi (ngaphakathi nangaphandle kwepayipi) ngaphandle kokugcwaliswa kwensimbi. Indlela yokushisela inqubo ye-TIG nesisombululo esiqinile esiku-inthanethi ukutholwa kwamaphutha kwamanje kwe-eddy.
Ngokombono webanga, ama-202 angaphezu kwama-manganese angaphezu kwelilodwa kanye ne-nickel engaphezu kwamathathu. Ekusebenziseni okusebenzayo, ngokusetshenziswa, i-202 ingconywana kune-201, kepha iningi labasebenzisi bemakethe lamukela ithubhu lokuhlobisa elingama-201 ngentengo ephansi kanye nokusetshenziswa okusebenzayo okufana no-202. 202 ine-chromium ne-manganese ethe xaxa kune-201, kanti ukumelana nemishini nokugqwala kungcono kakhulu, kepha uma kukhulunywa ngokuqinile, umehluko wokusebenza phakathi kwezinsimbi ezimbili ezingenasici awubalulekile, ikakhulukazi ekumelaneni nokugqwala.
Kukhona ama-nuances kuphela ebusweni bensimbi engenasici engama-201 no-202, kepha kusenokwehluka okuningi esimweni sangempela. Ngokwethulwa kwalesi sihloko, sinethemba lokusiza abasebenzisi bemboni ukuthi bathole insimbi engagqwali efanele imikhiqizo yabo lapho bethenga imikhiqizo, futhi bathuthukise ukusebenza kahle kwesicelo. , konga izindleko zangempela
Langaphambilini Ikhoyili yensimbi engenasici
Olandelayo: 304 304L ashisayo ipuleti lensimbi engagqwali